राखेपलाई आर्थिक पारदर्शी बन्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २८ साउन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउने दावी गरेका छन् । उनले भने ‘सुशासन र संस्थागत विकासमा अबको राखेपले नयाँ मोड लिने छ ।’‘अब कर्मचारीको दरबन्दीको समस्या हल भैसकेको छ ।’ मन्त्री विश्वकर्माको भनाई थियो ।
आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको खेलकुद भौतिक पूर्वाधार तथा योजनासम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले अपेक्षाकृत लगानी प्राप्त नभएका कारण सिमित साधन स्रोतमा नेपाली खेलकुद अगाडि बढेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुने र ती पुर्वाधार गुणस्तरीय र समयभित्र नै सम्पन्न गर्नका लागि गोष्ठी कोशेढुंगा सावित हुने बताए ।
साथै सरकारले सरकारले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने पनि प्रष्ट पारे । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सबै प्रदेशमा चक्रीय प्रणाली अनुसार आयोजना गर्ने योजना सुनाउँदै मन्त्री विश्वकर्माले सबै प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि हुने भएकाले सरकारले सबै प्रदेशमा चक्रीय प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जिकिर गरे ।
मन्त्री विश्वकर्माले अबको डेढ वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुनेगरी आवश्यक योजना तय गरिएको पनि बताए । यसैगरी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीको कामलाई तीव्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराएका थिए ।
मन्त्री विश्वकर्माले सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय तहमा खेलकुद ग्रामको विकास गर्न चाहेको बताएका थिए ।
यसैगरी सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालले नीति र योजना बनाएर काम गर्ने परिपाटीएको विकास गर्न लागेको र आम जनसमुदायमा खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने बताए ।
उनले तोकिएको मिति भित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्य विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको बताए । उनले विगतमा राखेपमा पेश्कि लिएर फछ्यौट नगर्ने परिपार्टी रहेको बताउँदै भने,‘विगतमा राखेपमा केहि बदमासी भएको देखियो । पेश्की लिने र समयमा पछ्यौट नगर्ने परिपार्टी रहेछ, अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । मेरो कार्यकालमा पेश्किी घट्छ बढ्दैन ।’
महालेखा परिक्षक दामोदर पुडासैनीले खेलकुदमा बर्षेनी बेरुजु बढिरहेको बताए । ११ सय ७४ जनाको नाममा बेरुजु रहेको बताउँदै भने, ‘यो कसैको पनि हितमा छैन । आर्थिक ऐन नियम विपरित जाने कोहि पनि बचेका छैनन् र कसैले पनि बचाउन सक्दैन ।’
उनले शुरुमा नै खरिद योजना बनाएर कार्यन्वन गर्न सुझाव समेत दिए । उनले देशमा ४० प्रतिशत खर्च असरामामात्र हुनु विडम्बना भएको बताए । उनले खेलकुद भौतिक पुर्वाधारको परफमेन्स अडिट टोली खताइएको र चैतसम्म संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । ‘भौतिक पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? कति अपुग छ । भएर पनि त्यसलाई उपयोग गरिएको छैन कि ? लगायतको विषयमा अडिट हुन्छ ।’ उनले भने ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख भोजराज पौडेलले अन्तिम महिनामा बढि खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भैसकेर आइसकेकोले अब साउन महिनाभित्र तयारी गरेर, भदौ महिनामा ठेक्का पट्टाको सूचना आव्हान गरेर असोजभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने छ’ उनले भने,‘यसले समयमा नै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने छ ।’ उनले दोस्रो चौमासिकको रकम माग गर्दा पहिलो चौमासिकको प्रगतिका ५० प्रतिशत कार्य भएको हुनुपर्ने बताए । उनले आर्थिक बर्ष समाप्त हुनु अघि २५ गतेभित्र खातापाता बन्द गरिसक्नुपर्ने नत्र पेमेन्ट नहुने समेत जानकारी दिएका थिए । गोष्ठी सोमबार सम्पन्न हुनेछ ।